Semalt: I-Botnet Traffic Guideline - Indlela Yokugwema
I-bot yi-computer ye "zombie" eyenziwe ngokuzenzekelayo eziphatha njengomntu wangempela. I-bot ingabachaphazela ukuphela komncedisi okanye ukuphela komsebenzisi. Ngokomzekelo, i-bots ingenza ukuhlasela okukhulu kwe-malware okuchaphazela ii-PC okanye idivayisi yeselula. Ngokufanayo, i-bots ingahlasela umncedisi obangela izibi ezininzi ezifana nokuhlaselwa kweDDoS. Iiwebhusayithi ezininzi ezifana ne-Google kunye ne-PayPal zixhomekeke kwi-bots ukuhlaziya imisebenzi yazo. Uninzi lwamava okhangelo oluthile luxhomekeke ekusebenziseni ngokufanelekileyo i-bots - criação de websites grátis. Hackers kunye nabanye abantu abaneenjongo ezigulayo banokusebenzisa i-bots ukufeza inkohliso ye-intanethi. Iibhokhwe azikho iifayile ezimbi kodwa zinesicelo esibalulekileyo kwiintlobo ezininzi zobuqhetseba ze-intanethi. Ngokomzekelo, ezinye iiwebhsayithi ziqulethe i-bots ezingakwazi ukuhlawula ulwazi lwekhadi lesikweletu kubasebenzisi abaninzi.
I-Artem Abgarian, iMenejala yeMpumelelo yoMthengi we-10 (Semalt , inika apha izinto ezinyanzelisayo malunga noku.
Ziyiphi iibhenets ezidalwe
Omnye unokuzibuza ukuba yeyiphi i-botnet ithrafikhi, kwaye yintoni enokuyenza. I-botnet ibandakanya iqela okanye inethiwekhi yale "computer zombie" esebenza kunye ukwenza umsebenzi ofanayo. Ubuninzi bombhobho okanye oomatshini abachaphazelekayo ngebhodi bangenza njengeziqhamuka kwiimpendulo ezahlukeneyo zeeva. Ngokuqhelekileyo, umhlaseli ukhangele iziganeko zokungcipheko kwixhoba okanye ekujoliswe kuyo. Ukusuka apha bajolise ekufakeni isofthiwe kwikhompyutha yexhoba. Eyaziwayo, abantu basebenzisa ii-imeyli ze-spam ukuze bathumele i-bots kubantu kwiikhomputha. Emva koko baqhatha ixhoba ngokuchofoza inkinobho yocingo-to-action eqala ukuhlaselwa. Abanye abakwa-scammers bathumela ii-imeyli ze-spam eziqulethe i-malware neTrojans..
Xa ibhobho ifakwe kwikompyutha yexhoba, ngoku basebenzise ukufumaneka kwenethiwekhi yePC ukuze bahlasele. Ngokomzekelo, baqhagamshelana nomncedisi wabo wesizinda apho imiyalelo kunye nemiyalelo ingena khona. Umntu osemva kokuhlaselwa kwe-botnet usebenzisa iseva yomyalelo kunye nolawulo (C & C) ukuqokelela nayiphi na ulwazi abayifunayo kumashishini a sulele.
Umhlaseli wewebhusayithi osebenza kwisikimu se-botnet ineprogram yomxhasi equkethe isethi yemiyalelo yebhodi. Le mi sebenzi inokubandakanya ukuqokelela idatha, ukukhishwa kweebrowser (ipaswedi, amakhadi esikwereti, ukungena ngemvume, kunye ne-cache), ukulawula ikhompyutha okanye nokusebenzisa i-computer yekhompyutha yexhoba. Enye yezinto eziguquguqukayo ze-botnets ziquka ukukwazi ukulawula ezinye i-bots enye okanye ezininzi.
I-Botnets idibanisa ukhuseleko lwe-intanethi kwiiwebhusayithi ezininzi. Ulwazi lokhuseleko nolwazi luchaphazelekayo ngokuhlaselwa kweetnet. Xa i-botnet ifaka i-malware kwi-PC yomsebenzisi, le ngcaciso ayisekho phantsi kolawulo lomsebenzisi. Abantu abagcina ulwazi olunzulu njengengxelo yezemali, ulwazi lwebhanki, iziqinisekiso zokungena ngemvume, njl .; kwisifo esichengeni sengozi yokulahlekelwa ngabahlaseli.
Abahlaseli bangaphinda bahlasele iikhomputha ezininzi kangangoko kunokwenzeka ngenxa yezizathu zabo. Ngokomzekelo, ukuhlaselwa kwebhotnet kuye kwenzelwa ukukhanyela ukuhlaselwa kweenkonzo kumanethiwekhi. Ukuhlaselwa kwe-DDoS kubandakanya ukuthumela izicelo ezininzi zewebhu kumncedisi, ukunciphisa ukusebenza kwazo ngenxa yokucwangcisa. Kwiimeko ezigqithiseleyo, abantu bazisa i-website yonke ngezo zinto.
I-Botnet ithrafikhi iyaqhelekileyo ekusebenziseni i-intanethi yansuku zonke. Ngokomzekelo, abantu banokuqalisa ukuhlaselwa kwebhentshi ukudala i-fake traffic okanye ukuthunyelwa kogaxekile. Eli nqaku le-SEO liqule iinkcukacha ezifana neyiphi intengiso ye-botnet. Uyakwazi ukugcina inkqubo yakho iphephile kwimiphumo yalezi zicwangciso zokuhlaselwa kwe-botnet.